‘हाई हिल’ को विरोधमा ‘केयू टू’ अभियान
चैत ११, २०७५ पत्रपत्रिका
टोकियो । ‘हाई हिल’ किन लगाइन्छ ? यसको दुइवटा जवाफ हुन्छ । एउटा स्टाइलका लागि । अर्को उचाइका लागि । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
त्यसो त कतिपय पहिरनसँग कम्बिनेसनका लागि ‘हाई हिल’ अनिवार्य नै हुन्छ । तर, फेसनका लागि लगाइने हाई हिल स्वास्थ्यका लागि भने राम्रो मानिँदैन । खासगरी, यसले मेरुदण्डसम्बन्धी समस्या निम्त्याउने कारण ‘हाई हिल’ लगाउन उपयुक्त नहुने सचेत गराइँदै आएको छ ।
तर, महिलाहरू आफूलाई आकर्षक देखाउने चक्करमा हाई हिल लगाउने गर्छन् । अझ आफ्नो कद अग्लो देखाउनका लागि पनि हाई हिल लगाइन्छ । तर, हामी देख्छौँ, हाई हिल लगाएर हिँड्डुल गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । महिलाहरू हाई हिल लगाएर हिँडिरहँदा निकै सतर्क हुने गर्छन् । उनीहरूले असहज महसुस गरे झँै देखिन्छ ।
केही समयअघि बलिउडका चर्चित फेसन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जीले भनेका थिए, ‘सौन्दर्य त्यो हो, जसलाई हामी सहज महसुस गर्छौं । सौन्दर्य सहज र स्वीकार्य हुन्छ ।’ उनले फेसनको सन्दर्भमा पनि यस्तै भनेका थिए । फेसन वा स्टाइल भनेको आफूलाई सहज हुने र त्यसले आफ्नो आत्ममनोबल बढाउने हुनुपर्छ । तर, हाई हिलले धेरैको आत्ममनोबल कमजोर बनाइरहेको हुन्छ । हाई हिल लगाउनु त्यति सहज पनि हुँदैन ।
प्रसंग जापानको हो । जापानी महिलाहरूले ‘हाई हिल’ विरुद्ध अभियान नै चलाएका छन् । जापानमा महिला र पुरुषका लागि कार्यथलोमा अलग–अलग वर्क कल्चर हुनेगर्छ । यही कारण महिलाहरूले आफ्नो कार्यथलोमा ड्रेस कोडलाई लिएर नयाँ अभियान चलाएका छन् ।
ती कार्यथलो जहाँ महिला र पुरुषका लागि ड्रेसकोड लागू गरिएको हुन्छ । अक्सर त्यस्ता कार्यथलोमा महिलालाई हाई हिल लगाउन बाध्य बनाइन्छ । यसको एउटै ध्येय हो, हाई हिल लगाएपछि महिलाहरू आकर्षक देखिन्छन् ।
एकातिर कामको चाप, अर्कोतिर असजिलो जुत्ता । हाई हिल लगाएर काम गर्नु पक्कै सजिलो हुँदैन । यद्यपि, ‘ड्रेस कोड’ को नाममा हाई हिल लगाउनैपर्ने बाध्यताका कारण धेरै कामकाजी महिलाहरू समस्यामा छन् ।
यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै अहिले जापानी महिलाहरूले ‘कुटू’ अभियान सुरु गरेका छन् । कार्यालयमा कामको बोझ र हाई हिलको कारण हुने शारीरिक समस्या बुझाउनका लागि उनीहरूले यस्तो अभियान सुरु गरेका हुन् ।
यस अभियानमा अहिलेसम्म १५ हजारभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाएका छन् । उनीहरूले ह्यासट्याग मिटू अभियान झै ह्यासट्या कुटू अभियानलाई ट्वीटरमार्फत छेडेका हुन् ।
के हो कुटू ?
जापानी भाषामा कुत्सुको अर्थ जुत्ता हो । कुत्सुको कु र मिटूको टू जोडेर यस अभियानको नाम ह्यासट्याग कुटू राखिएको हो ।
सोसल मिडियामा चलाइएको यो अभियानमा एक हप्तामै १५ हजारले समर्थन गरे । दुई महिनासम्म युमीले सोसल मिडियामा आफ्नो अभियान जारी राखे । जापानमा यो मुद्दाले अहिले आन्दोलनको रूप लिएको छ । पुरुष पनि यसको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।
प्रकाशित : सोमबार, चैत ११, २०७५१०:०८
सरकारसँग सेना एकाएक रुष्ट ! ‘कटुवाल प्रकरण’ जस्तै काण्ड मच्चिने खतरा बढ्यो !